I-China Linear atc cnc router yomzi mveliso kunye nabavelisi | JCUT
Umgca we-atc cnc router
Iziko lokulungisa ukusebenza kwamaplanga lenzelwe imigangatho ephezulu, iimfuno eziphezulu, ubuninzi bezithuthi ezizezona zisebenzayo kunye nabathengi abasekupheleni, zilungele iintlobo ezahlukeneyo zeenkuni eziqinileyo, i-density board, board composite, ipulasitiki enzima, imarble yokufakelwa, i-acrylic kunye nezinye izinto ezisetyenziswayo.
1. Uzinzo lobume: iyonke intsimbi yentsimbi ibotshwe kunye, ethi iphathwe yintshukumo (yokubuyisa) yokwaluphala, kwaye kungabikho lutshintsho emva kokusetyenziswa kwexesha elide.
2. I-Taiwan Syntec yenkqubo yokulawula ukusebenza kwemizi-mveliso ephezulu, enomgangatho ozinzileyo ogqibeleleyo, ulondolozo olulungileyo, inokulawula ukugqitywa kokulungiswa kwamacwecwe e-3D amaninzi, ngokukhawuleza, ukuqhutywa okuthe tye kwe-3D, ukuzoba nokusika.
3. Spindle motor ingeniswe ukusuka Italy HSD amandla aphezulu umoya-opholileyo isixhobo spungle, ukuchaneka eliphezulu, ingxolo ephantsi, isantya esiphezulu, ubomi obude, ukusebenza egudileyo ukunika ukudlala ngokupheleleyo ukusebenza okuphezulu kumatshini.
4. I-Itali engeniswe kwasekuqaleni yabona ukuqhula kumqolo wendlela yokudibanisa, inokuba kukugqitywa kwexesha elinye ukumba, ukusika, ukrola, isitya se-hinge, isitshixo kunye nezinye iinkqubo ezinzima zokwenza iipaneli emnyango.
5. I-Japan Yaskawa i-servo iqhuba inamandla kuzo zonke iintlobo zokusika iinkuni ezinzima kunye nokubaza.
6. Isikhokelo somugca samkela ungeniso lomgca osisikwere ongeniswe ngaphakathi ngomqolo ophindwe kabini kunye nemigca emine yeebhloko zesilayida sebhola, enokuthwala umthwalo onzima, ibaleke kakuhle kwaye igcinwe uzinzo oluphezulu.
7. Inkqubo yokutshintsha kwesixhobo yamkela ubuchwepheshe obuphambili bamazwe, obunokutshintshiselana ngezixhobo ezifunekayo ngobulumko. Isixhobo sokugcina isixhobo sinokufikelela kwi-12-16 iziqwenga.
8. Itheyibhile enetafile ye-vacuum ekhokelayo yamazwe aphesheya, uxinaniso lwetafile ye-bakelite, akukho deformation, i-adsorption ephezulu, i-adsorption eyomeleleyo yezixhobo ezahlukeneyo, le tafile yomatshini kunye ne-suction plate yokuphakamisa isixhobo esizenzekelayo ilungele ngakumbi ukuba yenziwe umngxuma wecango lokutshixa umnyango kunye nokuqhubekiswa kwendawo yokubeka.
9.Ukungqinelana kwesoftware: Iyahambelana ne-MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, JDpaint njalo njalo.
1. Umzi mveliso wefanitshala:
Ifanitshala yephaneli, ifenitshala yesiqhelo, iikhabhathi, iwadihedi, ibhedi yentloko, ifanitshala yasendulo kunye nazo zonke iintlobo zephaneli yefenitshala eqingqiweyo yeentyatyambo kunye nenkqubo yokuvula isitshixo sokugqitywa kwexesha elinye.
Umzi mveliso wokuhombisa:
Zonke iintlobo zeemurals zokuhombisa, izikrini, iipatheni zokuhombisa, iibhodi ezinamacala amathathu, ibhodi ethatha isandi kunye nokunye ukuhombisa kokuhombisa.
3. Ukulungiswa kwemveliso egqityiweyo yezixhobo zeefektri:
Ukulungiswa ngokunzulu kweemveliso ezigqityiweyo ezinje nge-countertops zoomatshini bokuthunga bemizi-mveliso kunye nezinto ezichasene nezinto zombane.
4. Umzi mveliso wezixhobo zomculo:
Ukulungiswa kwentloko yegitagini, ukugqitywa kokulinganisa isiginci kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhombisa zeMculo yezixhobo zomculo ogqityiweyo womhlaba kunye nemveliso emithathu yomgangatho egobile
5. Umzi mveliso:
Ukuveliswa kobungakanani bokubumba kweenkuni, igwebu lobumba elilahlekileyo, isikhunta sokutya (njenge: isikhunta sekhekhe inyanga) kunye nolunye uhlobo lokubumba.
6. Umzi mveliso wezandla:
Ukuhlangulwa kwezobugcisa, ukuzoba imiboniso bhanyabhanya, ubugcisa bezinto zomsebenzi wobugcisa, izihombiso zemoto kunye nobunye ubugcisa bokuzoba.
7. Ukwenza iimodeli zezakhiwo
8. Umzi wentengiso:
Ukusikwa kwe-Acrylic kunye nokubaza, imodeli yokwenza i-acrylic blister, kunye neebheji ezahlukeneyo kunye neempawu zesikripthi kunye nemveliso.
Umatshini wokuSika oPhezulu kwi-R8 CNC
Indawo yokusebenzela (X * Y * Z) 1300MM * 2500MM * 200MM
Isikhafu I-9kw GDZ ATC spindle
Isixhobo seMagazini Isithuba se-8 servo emgceni isixhobo sokutshintsha isixhobo somatshini ngesixhobo sesixhobo
Imoto Shanlong 1300W servo motor
Umqhubi Shanlong servo umqhubi
Umgaqo kaloliwe I-X, Y, i-axis yamkela i-Hiwin Linear yesitimela engu-25, isakhiwo sokuxhoma kamva
Z axis I-Z axis TBI -2510 i-screw yebhola
X, Y izembe I-X, Y i-1.5m ye-helical rack
Inkqubo yokulawula Shanlong 3042 zonke zikulawulo olunye lwenkqubo
IKhabhinethi Unjingalwazi omkhulu wekhabhathi
Ukunciphisa ngokutsha Japan Shimpo kuncitshiswa
Itafile yomatshini Itafile yokuhlamba inemimandla emi-6, umpompo ongu-7.5kw / 380
Umqokeleli wothuli 4kw / 380v
Khangela umsebenzi Ukusebenza kwe-engile yasekunene + isixhobo sokutyhala esenzekelayo
Umzimba womatshini Umzimba womatshini osindayo obunzima obu-3.5, otywina itafile yesinyithi ngentsimbi
Ukusinda okushiyekile 2800kg
Edlulileyo: I-Wood router ye-atc
Okulandelayo: Umatshini we-atc funiture
I-spindle ezine ze-atc cnc router
Oomatshini bokuchwetheza abathathu be-cnc router